Displaying 31 - 40 of 1279
ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ မိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်ခြင်း မဟာဗျူဟာသတင်းစဉ် စာတမ်းအမှတ် (၁)
ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ မိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း အားကောင်းလာစေရေး မဟာဗျူဟာအား ဧပြီလ ၂ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အရပ်ဘက်ကဏ္ဍများအား ကာကွယ်မြှင့်တင်ထောက်ပံ့ရန် လိုအပ်သော နည်းနာများကို ဆွေးနွေးသည့် စကားဝိုင်းနှင့်အတူ မိတ်ဆက်ခြင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းမျာ
The EU-CSO Partnership Strategy was launched in April 2019 to support, protect and promote civic space in Myanmar. Read the first issue of the EU-CSO Partnership Strategy Newsletter to be informed about news, upcoming events, and funding options for civil society organisations in Myanmar.
Read the newsletter in English :
Official Trailer: 28th European Film Festival in Myanmar
/file/official-trailer-28th-european-film-festival-myanmar_enOfficial Trailer: 28th European Film Festival in Myanmar
Video of Official Trailer: 28th European Film Festival in Myanmar
Read more about Official Trailer: 28th European Film Festival in Myanmar
Read more about EU priorities for the 42nd session of the Human Rights Council
The European Union launched the CASE2Learn project to support over 300,000 indigenous teachers and students in9States and Regions throughout Myanmar. The EUR 20 million project will be implemented between 2019 and 2023 by the Adventist Development and Relief Agency (ADRA) which has over 35 years of experience delivering education projects in Myanmar and its local implementing partner RISE (Rural Indigenous Sustainable Education).
မွနျမာပွညျတိုငျးရငျးသားလူမြိုးစုမြား ပညာရေးကို EU အကူအညီဖွငျ့ အထောကျအပံပေးမညျ့ CASE2Learn စီမံခကျြ
နပွေညျတျော၊ စကျတငျဘာ ၃, ၂၀၁၉ - မွနျမာပွညျတဈဝှမျး ပွညျနယျနှငျ့တိုငျးဒသေကွီး ၉ ခုတှငျ မွနျမာနိုငျငံဖှား တိုငျးရငျးသား ဆရာနှငျ့ ကြောငျးသား အရအေတှကျ ၃၀၀,၀၀၀ ကြျောကို အထောကျအပံ့ပေးမညျ့ CASE2Learn စီမံခကျြကို ဥရောပသမဂ်ဂ EU မှ ယနတှေ့ငျ စတငျလိုကျပါသညျ။ အဆိုပါ ယူရိုငှေ သနျး၂၀ တနျဖိုးရှိ စီမံခကျြကို ၂၀၁၉ ခုနှဈမှ ၂၀၂၃ ခုနှဈအတှငျး မွ